Ukuheha Izivakashi Inqaba Ngokuthanda umoya yindawo yokuhlala yekhulu lama-20 ebekwe ngaphakathi kwamahektare ayi-10 eduze kwedolobhana laseRavadinovo, indawo eyiNtabeni esentabeni yeStrandza. Vakashela futhi ujabulele amaqoqo aziwa umhlaba wonke, ubuciko bokwakha obumangalisayo nezindaba zomndeni ezikhuthazayo. Relax phakathi kwezingadi ezi-idyllic, ujabulele ukuhamba kwamahlathi kanye nolwandle futhi uzwe umoya wezinganekwane.
Ukuheha Izivakashi INqaba iphrojekthi yangasese eyaqala eminyakeni engamashumi amabili edlule ngonyaka we-1996 iphupha isuka ebuntwaneni yakha eyayo iCity, okufanayo nasezindabeni zezinganekwane. Umqambi ubuye umakhi, umakhi kanye nomqambi wemvelo. Umqondo ophambili weprojekthi ukwakha indawo yokuzilibazisa yomndeni, njengokuheha izivakashi.
Umkhiqizo Wokufundisa Inzuzo ebaluleke kakhulu yalo mkhiqizo kalula yokufunda nokuthuthuka kwememori. Ku-Shine and Thola, wonke ama-Constellation enziwa ngokoqobo, futhi le nselelo yenziwa kaninginingi. Kwenza isithombe esiqinile engqondweni. Ukufunda ngale ndlela, kusebenza futhi kutadisha nokuphindaphinda, akukukhubazi futhi kwenza Memory ihlale isikhathi eside futhi ijabulise. Kuyinto ethinta imizwa kakhulu, esebenzisana, elula, emsulwa, emincane futhi yanamuhla.
Ihhotela Leli hhotela litholakala ngaphakathi kwezindonga zeThala Temple, ezansi kweNtaba iTi. Inhloso yabaqambi bekuwukuguqula ukwakheka kwehhotela ukuhlinzeka izivakashi indawo yokuhlala ethule futhi enethezekile, futhi ngasikhathi sinye, vumela izivakashi zithole umlando namasiko ahlukile aleli dolobha. Ngokusebenzisa izinto ezilula, amathoni akhanyayo, izibani ezithambile, nobuciko obukhethwe ngokucophelela, isikhala sibonisa umqondo womlando nomlando wesikhathi samanje.
Ukuheha Izivakashi Ukuheha Izivakashi Umkhiqizo Wokufundisa Ihhotela I-Simulator Ye-Forklift Opharetha Umbukiso